Ukuphuka Kwezinkomo Zelobolo – The Ulwazi Programme
Kuyisiko ukuthi uma intombi ilotsholwa iseyintombi nto noma ikhulelwe ikade iyintombi nto kunezinkomo ezikhokhwayo eziqondene nomama kanye nezintombi. Kunenkomo ekhishwa isoka ebizwa ngokuthi isidikli noma umgezo wezintombi. Uma kukhulelwe intombi kuphuma izinkomo ezintathu ukuyovala ihlazo emzini womnumzane. Lenkomo ngeyokuqala okufikwa nayo ikhulekwe ngaphandle kwesango, ihlatshelwe khona kukhishwe inyongo, kuchelwe ngayo umuzi, izintombi ziyogeza ngenyongo yayo emfuleni ohambayo, zikhiphe ichilo. Lokhu kusho ukugezwa komuzi womnumzane njengoba umfana esuke esephule umthetho wenza ingane yomnumzane umfazi noma wangahlonipha umuzi wendoda. Isidikli kusuke kugezwa ngaso izintombi ngoba lowo okhulelwe noma ophukile usuke etshele ihlazo ezintombini zasendaweni. Inkomo yesidikli kayibalwa emalobolweni noma ngabe uyise wengane uyaqhubeka nokulobola, usuke esazozikhipha zibe yishumi nanye uma kade kusayintombi nto. Isidikli asidliwa ngamantombazane asemancane, namabhungu. Idliwa asebezele, izalukazi namakhehla futhi inyama idliwa budlabha ngoba kufanele iphele ngalelolanga ayigcinwa.
Izinkomo zamalobolo ziyancipha noma ziyehla ngokwenani njalo uma owesifazane ethola ingane. Uma intombi yoniwe okokuqala yakhulelwa, oyonile kufanele akhiphe izinkomo ezintathu zokuhlawula okubalwa ingquthu (inkomo kanina) ebalwa emalobolweni, isidikli nemvumo okuyinkomo kayise wentombi, engabalwa emalobolweni. Uma sekukhokhwe lezizinkomo uma intombi isilotsholwa kusuke sekusele eziyisishiyagalolunye. Uma lowo ephinda ukukhulelwa, omkhulelisile ukhipha inkomo eyodwa yenhlawulo, lenkomo eyodwa ibalwa emalobolweni. Uma unezinga eziyisihlanu ozolobola uzokhipha izinkomo eziyisithupha, izinkomo eziyisihlanu ingane ngayinye, eyodwa inkomo kanina.
Source: Ilanga Langesonto,
7 thoughts on “Ukuphuka Kwezinkomo Zelobolo”
Ngicela ukubuza Ntokazi. Mina ngazi ukuthi inkomo kamama ikhiswha umuntu owone intombi. okusho ukuthi uma indoda ilobola intombazane enabantwana abayisihlanu kumele ikhiphe izinkomo zamalobolo eziyisihlanu (hhayi isithupha njengokusho kwakho) zamalobolo. Inkomo kamama ayibe isakhishwa. Ngicela ucacise kulokho.
Kuye kwenziweni uma intombazane ikhulelwa isike yalala nomunye umfana ngaphambilini?
Cofa lapha ukuthola ulwazi Izinkomo zeLobolo I
Ngicela ukubuza ngenkomo yamasi okumele ingakhokhwa olobilayo
Cofa lapha ukuthola ulwazi Amagama ezinkomo zokulobola
07/02/2022 at 9:00 pm
Ngicela ukucaciseleka lana ekuphukeni kwezinkomo, ngiyacabanga akulona isiko ukuphula inkomo ngoba nakhu umuntu esenengane, ingane ayihlangani namalobolo nokuphuka kwezinkomo. Iyodwa iyodwa inkomo ephukayo uma umuntu umthole engaseyona intombi nto, kuphuka ekamama. Uma umuntu ezala izingane zize zibe wu12 engashadile kophuka izinkomo ezingakike lapho, ngisacela ukucaceleka lapho, ngiyabonga
09/03/2022 at 9:49 am
Cofa lapha ukuthola impendulo Izigaba Zamalobolo